ဘယ်လိုစမတ်အိတ်လေကြောင်းခရီးသွားအသွင်ပြောင်းနိုင် - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဘယ်လိုစမတ်အိတ်လေကြောင်းခရီးသွားအသွင်ပြောင်းနိုင်” ရော့ Walker ကကရေးသားခဲ့သည်, တနင်္ဂနွေ 15 နိုဝင်ဘာလအပေါ် Observer များအတွက် 2015 00.05 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
သင်လေဆိပ်အတွက်ခရီးဆောင်အိတ်များဝိုင်းလေးမှာစောင့်ဆိုင်းနေစိုးရိမျရလုပ်ပါ? ငါ. အကြှနျုပျ၏အိတ်ပေါ်လာဖို့အဘို့နှင့်ကြာကြာကကြာ, ငါရ edgier. Battery ကိုအဝတ်သေတ္တာကိုသာလက်တဆုပ်စာပတ်ပတ်လည် trundling ကြသောအခါထိုသို့ = ခဏတစ်ဦးကိုကွောကျရှံ့ဖြစ်ပါသည်, သင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏အဘယ်သူအားမျှသော.
သို့သော်စိတ်ကူး, သင်သည်သင်၏ရက်ရွက်ဒေါသထွက်မှုများအားစုံစမ်းရေးကော်မရှင်စားပွဲခုံမှအလျင်စလိုအဖြစ်သင့်ဖုန်းစကားပုံအပေါ်တစ်ဦးကစာသားအရ: "ငါသည်ဝိုင်းလေးပေါ်မှာပေါ့ 5, လာငါ့ကိုတက်ခူး။ "
သင့်ရဲ့သေတ္တာနည်းပညာပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများအားပေးခံရဖို့နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်, In-built GPS စနစ်ခြေရာခံခြင်းနဲ့ messaging နှင့်အတူ. ဒါကအိတ်သင့်ရဲ့ဖုန်းနှင့်အတူတွဲနိုင်ပါလိမ့်နှငျ့သငျသူတို့ရှိရာအကြောင်းကိုစာသားပေးပို့လိမ့်မည်ကိုဆိုလိုသည်, သူတို့တစ်တွေလေယာဉ်ကိုချွတ်ယူသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသူတို့ကိုဖွင့်လှစ်လျှင်ခဲ့ကြရသောအခါ.
သို့သော်အသုံးပြုသူဝယ်လိုအားကျေပွန် "စမတ်အိတ်" ဖြစ်ပါတယ်?
Ramesh Tainwala, ထိုအိတ်ကုမ္ပဏီ Samsonite ၏ CEO, ထိုသို့လုပ်ရပ်ကရေပန်းစားသည်မဟုတ်ရန်ကင်း. သူက embedded နည်းပညာကို 1970 ခုနှစ်တွင်သေတ္တာရထားဘီးအဖြစ်အိတ်ကမ္ဘာကြီးအတွက်အဖြစ်ကြီးမားသောတစ်ခုန်ဖြစ်လိမ့်မည်ခန့်မှန်း.
"စမတ်အိတ်သယ်ဆောင်ပါကကိုင်တွယ်နှင့်အတူပိုင်ရှင်နှင့်အတူနှင့်အခြားအပေါ်တစ်ဘက်မှာဆက်သွယ်ပြောဆိုလိမ့်မည်. အရာအားလုံးချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်. ဒါဟာလာမယ့်ကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်လိမ့်မည်,"သူကပြောပါတယ်.
လေဆိပ်သို့မဟုတ်ဝန်းကျင်သငျသညျနောကျလိုကျနိုငျတဲ့ Motors သေတ္တာမှာသူ့ဟာသူအတွက်စစျဆေးနိုငျကြောင်းအိတ်မှရှေ့ဆက်စဉ်းစားပါ, တစ်နည်းနည်းတစ်စက်ရုပ်ခွေးတူ.
အဝတ်အစားသို့ကြံ့ခိုင်ရေးအာရုံခံကိရိယာမျိုးကိုရက်ဖို့နည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်ချီ teaming ဖြစ်ကြောင်းဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်၏ခဲအောက်ပါ, ဒါကြောင့် Samsonite က Samsung နှင့်တွဲဖက်လုပ်ငန်းဆောင်သည် ယခုနှစ်အကုန်ချိတ်ဆက်အိတ်၏သစ်တစ်ခုအကွာအဝေးဖွင့်ဖို့.
အားလုံးကတော့ဒီဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ကြီးမားသော-name ကိုအမှတ်တံဆိပ်မှလာ၏, သိပ်နေရာအပိုင်းအခြားတွန်းအားပေး Start-ups ၏ကြီးထွားလာဂဏန်းရှိပါတယ်. အမေရိကန်အခြေစိုက် Planet ကို Traveler အပေမယ့ဝက်ဘ်ဆိုက် Kickstarter ကမှလှည့်လိုက်ပါတယ် ၎င်း၏အာကာသဖြစ်ရပ်မှန်ဖွင့်ဖို့ကိုကူညီ 1. ၎င်း၏ Hi-tech ပစ္စည်းတွေလက်ဗွေရာစကင်သော့ခတ်ပါဝင်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခြေရာခံခြင်း, Self-အလေးချိန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ချိန်ခွင်, တစ်ဦးစန်းသေတ္တာသို့မဟုတ်ဖုန်းသို့သင့်ရဲ့သေတ္တာကိုဖွင့်နိုင်သည်ကိုပင် Bluetooth စပီကာ.
"စမတ်အိတ်အမှုအရာတော်တော်မှန်သွားမအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှိသည်သောလီယံသို့ပုတ်သည်,"ရစ်ချတ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ကပြောပါတယ်, သုတေသနအုပ်စုမှာခေတ်ရေစီးကြောင်းလေ့လာဆန်းစစ်, Mintel. "ဒါဟာပွင့်လင်းဤလောကသို့ထွက် '' စမတ်နေအိမ် '' နည်းပညာပါပဲ။ "
လီယံအနေနဲ့စျေးကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြောင်း Numbing, သော်လည်း. အဆိုပါအာကာသဖြစ်ရပ်မှန် 1 အပြည့်အဝ-size ကိုအိတ်အဘို့အကြောင်း£ 450 ကုန်ကျမည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်, အ PPP ဖြင့်ချဉ်းကပ်-အပေါ်အဘို့နှင့်£ 390.
သို့သော် GPS စနစ်-ခြေရာခံအိတ်အကြောင်းမရှိဖျက်ဆီးလေဆိပ်လုံခြုံရေးကိုလိမ့်မည်? ဘယ်လိုသူတို့အားစဉ်ဆက်မပြတ်သတိပေးခကျြမြားနှငျ့အတူယခုစတုရန်းဘယ်နေရာမှာမဆိုလေယာဉ်အနီးဖုန်းများပိတ်ထားပါဘူး?
Tainwala ကိစ္စများရှိပါသည်ဝန်ခံသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြေရှင်းနီးစပ်သူဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သည်. သူကဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါသည်, တကယ်တော့, သူနည်းပညာကိုလာမည့်ငါးအတွက် Samsonite ရဲ့အိတ်၏လူအပေါင်းတို့အားအဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်လိမ့်မည်ယုံကြည်သည်ကြောင်း 10 နှစ်ပေါင်း. "သင်က activate သို့မဟုတ်မဖြစ်စေ, ထိုအိတ့်အတူပါလာလိမ့်မယ်,"သူကပြောပါတယ်. အခြားသူများကဒါယုံကြည်တယ်မဟုတ်.
မေလလိန်း, ဈေးကွက်ထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီ Euromonitor မှာသုတေသနမန်နေဂျာ, ကပြောပါတယ်: "စမတ်အိတ်ကမ္ဘာတဝှမ်းအစိုးရအာမခံခြင်းဖြင့်စိစစ်ခံရလိမျ့မညျ. တစျခုမှာသူတို့ကို '' ပိုကောင်းဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်မကောင်းထက် '' ချဉ်းကပ်မှုယူပြီးနှင့်ပြဿနာများရှောင်ရှားရန်လုံးဝကြောင့်တားမြစ်စိတ်ကူးနိုင်ဘူး။ "
The Department for Transport declined to comment. Crucial, ဖြစ်ကောင်း, the big airlines are understood to be keen for smart luggage to break into the mainstream and are working with companies such as Samsonite to iron out the security challenges.
“Travellers want to findabalance between tech that enriches their trip and gadgets that tie them into constant connectivity”, သူမကပြောပါတယ်.
“Whether you’re waiting forasuitcase at the airport or you’ve thrownabag on to the roof ofabus fora10-hour journey, knowing where it is offers huge peace of mind," သူမကပြောပါတယ်.
There might be something else for smart-luggage brands to worry about, သော်လည်း. Cope predicts that in the future we won’t bother to pack at all. အစား, when we get to our destination, the clothes and things we need for our trip will already be there waiting for us, hired in advance for the duration of our stay. “That’s where we’re headed,"သူကပြောပါတယ်.
25610	0 Air transport, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, အသက်နှင့်စတိုင်, အဓိကအပိုင်း, သတင်း, Rob Walker, Samsung က, နည်းပညာ, အဆိုပါ Observer, ဗြိတိန်သတင်း, ဝတ်ဆင်ကနည်းပညာ, ကမ္ဘာ့ဖလားသတင်း
← မောင်းသူမဲ့ကား မှစ. Jetpack မှ နယူးစမတ်ဖုန်းဘက်ထရီအားကိုအားသွင်းနိုင် 48% ငါးမိနစ် →